काठमाडौंको टुँडीखेलमा संविधान दिवस मनाइरहँदा खुल्लामञ्चमा जनता खाना माग्दै (भिडियो) – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाडौंको टुँडीखेलमा संविधान दिवस मनाइरहँदा खुल्लामञ्चमा जनता खाना माग्दै (भिडियो)
काठमाडौं, ३ असोज । सरकार मूल आयोजक समिति गठन गरेरै धुमधामका साथ संविधान दिवस मनायो । काठमाडौंको टुँडीखेलको एकातिर भव्यसँग पुष्पवृष्टि गर्दै बाजा–गाजा सहित संविधान दिवस मनाईदै थियो तर अर्को तिर कोरोना महामारीका कारण रोजगार गुमाएकाहरु खानाको पर्खाईमा देखिन्थे ।
यो मात्र होइन, देशभर राज्यको अभाव खट्किरहेको छ । प्रहरी दमन बढेको छ, कारागार संक्रमणको असुरक्षामा त्रसिद् छ । तर, सरकार सामान्य अवस्था जस्तो धुमधाम दिवस मनाउन तल्लिन रहेको आलोचना पनि उत्तिकै भए ।
संविधानले दिएका नागरिकका सबै अधिकार पाएका छन् ? सरसर्ती हेर्दा नागरिक अझै असन्तुष्ट छन् । संविधान बनेपछि कायापलट हुने आशा बोकेका आम नागरिक सरकारको नेतृत्वकर्ताबाट निराश बनेका छन् ।
सरकारले भव्यताका साथ संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा खानाको खोजीमा भौतारिरहेका आम नागरिक उदास बने । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका आम नागरिक पेटको चिन्तामा छन् ।
एउटा कुशल प्रशासक नियक्ति गर भन्दै जनआक्रोश सडकसम्म पुगेको छ । प्रशासन प्रहरी लगाएर आम आवाज बन्द गर्न चाहन्छ । उता, चिकित्सा सुधारको माग गर्दै अनशनमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसीका माग सुन्ने चाहना नै नराख्ने सरकारबाट संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको आशा कसरी गर्न सकिन्छ ? यस्ता प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् ।
जनादेशको अवमूल्यन भएकै कारण संविधान संस्थागत हुन नसेको जानकारहरु बताउँछन् । दर्जनौं उपाधि र सम्मान दिन तल्लिन सरकार कोरोना संक्रमणको तीव्र फैलावटलाई नजरअन्दाज गर्दै छ । बरु, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गर्छन्
प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तै संक्रमण रोकथाममा उल्लेख्य काम भएको छ त रु व्यवहारमा त्यो देखिदैन । महामारीको रोकथाममा नजानेर वा क्षमताले नसकेर भन्दा नियत खराब भएका कारण नेपाल विफल भएको हो ।
मुलुक भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । बरु संविधानको उपहास गर्न सरकारले रत्ति छाडेन । नेपालको संविधानले जनताबाट पराजितलाई चोर बाटोबाट पुनः संसद पु¥याउने परिकल्पना गरेको छैन । तर, वर्तमान सरकारले त्यो काम पनि ग¥यो ।